सङ्खुवासभामा बस दुर्घटना, १४ जनाकाे मृत्यु ! « News24 : Premium News Channel
सङ्खुवासभामा बस दुर्घटना, १४ जनाकाे मृत्यु !
खाँदबारी । सङ्खुवासभाको मादीबाट झापाको दमक जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस आज बिहान दुर्घटनाग्रस्त भएकाे छ । मादी नगरपालिका–६ को पुलुड्डस्थित सात घुम्तीमा दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
आज बिहान ७ः३० बजे मादीको ओखरबोटे बजारबाट झापाको दमकतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको थियो । स्थानीयका अनुसार बसमा करिब १९ देखि २१ जना यात्रु थिए । बस दुर्घटनामा परेका पाँच जनाको भने जीवितै उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू घाइते अवस्थामा रहेका छन् ।
दुर्घटनाका मृतकहरूको पहिचान भइसकेको छैन । मृतकबारे विवरण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । बस सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको छ । घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरिरहेका छन् । क्षतिको यकिन विवरण पनि आइनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवेदीले बताउनुभयो ।